Ahoana ny fametrahana LAMP amin'ny Ubuntu | Avy amin'ny Linux
Mametraka LAMP (Linux Adamba MySQL PHP) amin'ny Ubuntu dia tsotra be.
Mizara telo ny fomba fiasa: hametraka sy hizaha Apache, hametraka ary hitsapa PHP, ary hametraka amin'ny farany ny manager MySQL database.
5 Fidirana lavitra amin'ny database
7 fitehirizam-boky gd
8 SSL amin'ny Apache 2
Ao amin'ny terminal, midira:
Vonona, efa manana Apache 2 napetraka ao amin'ny masininao ianao.
Hanomboka ho azy ny mpizara tranonkala rehefa manamboatra ilay milina ianao. Raha tsy maintsy atombokao amin'ny tanana ity dia ampidiro ao amin'ny terminal ity baiko manaraka ity:
sudo serivisy apache2 manomboka
Mampijanona ny serivisy:
sudo service apache2 fijanonana
Ary hamerenana azy io indray
sudo service apache2 hamerina
Ny lahatahiry izay tokony hitahiry ireo tranonkalanao dia: / Var / www
Mba hanaovana izany dia ilaina ny manome ny mpampiasa anao ireo tombony ilaina. Ity baiko manaraka ity dia matetika mazàna amin'ny ankamaroan'ny tranga, na dia mety miovaova arakaraka ny ambaratonga fiarovana ilainao amin'ny mpizara tranonkala anao io:
Hiditra http://localhost ao amin'ny tranonkalanao. Tokony hahita pejy Apache ianao.
Amin'ny terminal, ampidiro ity baiko manaraka ity:
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-klioba php5-MySQL
Atsaharo ny Apache miaraka amin'ny:
Mba hitsapana fa napetraka tsara izy dia hamorona script PHP tena tsotra izahay:
Ampidiro ity atiny manaraka ity ary tahirizo ilay rakitra:
Mba hampandehanana ny script dia nosokafako ny tranonkalanao ary niditra tamin'ity URL manaraka ity aho: http://localhost/prueba.php. Tokony hahita pejy misy fampahalalana momba ny fametrahana PHP anao ianao.
Ampidiro ao amin'ny terminal ity baiko manaraka ity:
sudo apt-mahazo mametraka MySQL-server MySQL libmysqlclient-dev
Mandritra ny fizotry ny fametrahana dia hangataka anao hanome ny tenimiafin'ny mpampiasa root MySQL izy.
Ampidiro ao anaty terminal ireto manaraka ireto:
sudo serivisy mysql serivisy
Tokony hamerina zavatra momba ny fipetraky ny fizotry ny MySQL.
Hanamarina fa mandeha tsara ny teny miafina:
Aiza xxx no tenimiafina nampidirinao nandritra ny fametrahana MySQL.
Raha te hanova ny teny miafina faka ianao dia mihazakazaha ity baiko manaraka ity aorian'ny fidirana ao amin'ny MySQL:
FANAZAVANA FITENY HO AN'NY 'faka' @ 'localhost' = PASSWORD ('yyy');
solon'i yyy ho an'ny teny miafinao vaovao.
Mihamaro ny olona aleony mampiasa MariaDB fa tsy MySQL. Marihina fa MariaDB dia manana fampifanarahana avo lenta amin'ny MySQL, satria mitovy ny baiko, ny interface, ny API ary ny tranomboky, ny tanjony dia ny afaka manova serivera iray hafa ho an'ny iray hafa. Izany dia satria i MariaDB dia fork mivantana an'ny MySQL, miaraka amin'ny fahasamihafana fa manana fahazoan-dàlana GPL, tsy toy ny MySQL izay, taorian'ny nividianan'i Oracle an'i Sun, dia nanova ny fahazoan-dàlana ho an'ny tompony.
Andao hojerentsika ny fomba fametrahana MariaDB, fa tsy MySQL.
Raha toa ka nametraka ny MySQL teo aloha ianao dia tsy maintsy esorinao aloha:
sudo apt-get purge mysql * sudo apt-mahazo autoremove
Avy eo, mila manampy ny PPA mifanaraka amin'izany ianao. Amin'ny tranga Ubuntu 13.10:
sudo apt-mahazo mametraka rindrambaiko-fananana-mahazatra sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp: //keyserver.ubuntu.com: 80 0xcbcb082a1bb943db sudo add-apt-repository 'deb http://mariadb.biz .net.id // repo / 5.5 / ubuntu saucy main
sudo apt-get fanavaozana sudo apt-mahazo hametraka mariadb-server mariadb-client
Hangataka ny tenimiafin'ny mpampiasa faka io, toa ny MySQL.
Hanamarinana ny fametrahana marina ny MariaDB:
Tokony hamerina vaovao momba an'i MariaDB izany.
Mba hijerena ny satan'ny fizotran'ny mariadb:
Fidirana lavitra amin'ny database
Raha te hiditra amin'ny MySQL amin'ny alàlan'ny script lavitra (izany hoe tsy ampiantranoina amin'ny mpizara anao manokana) dia mila manitsy ny adiresy fatorana amin'ny /etc/mysql/my.cnf ary soloina ny adiresy IP (127.0.0.1) amin'ny adiresy IP anao.
Aorian'ny fanovana ny my.cnf dia avereno amin'ny MySQL ny:
sudo serivisy fanombohana indray ny serivisy
phpMyAdmin dia mpitantana sary ho an'ny MySQL be mpampiasa amin'ny admin. Raha hametraka azy dia mampidira terminal:
sudo apt-mahazo mametraka phpmyadmin
Raha te-hiditra azy dia fidio ity URL manaraka ity avy amin'ny tranokalanao: http://localhost/phpmyadmin
Aza adino ny manindry ny bara habakabaka ao amin'ny efijery fikirakirana mba hisafidianana Apache2 ho mpizara tranonkala izay te-hampifanaraka azy ho azy isika.
Raha tsy afaka miditra amin'ny phpmyadmin ianao dia andramo ny mamorona symlink ao anaty folder www, toy izany:
Raha te hanampy fanampiana amin'ny famoronana graf sy fanodinkodinana amin'ny PHP ianao, dia nanoratra tao amin'ny terminal iray aho:
sudo apt-mahazo mametraka php5-gd
SSL amin'ny Apache 2
Raha te hampihetsika ny modely SSL (Secure Socket Layer) ao amin'ny Apache 2, midira ao amin'ny terminal:
Raha te hahita ny fanovana dia aza adino ny mamerina ny Apache2 amin'ny:
sudo /etc/init.d/apache2 hamerenana indray
Fuentes: Wolfwolf & Unixmen
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » Ahoana ny fametrahana LAMP amin'ny Ubuntu
Raha mampiasa Ubuntu Minimal ianao dia tsara kokoa ny asany (ao amin'ny Ubuntu Server ireo singa ireo dia efa napetraka aorio).
Fantatro ny fomba iray toa tsotra kokoa amiko, ny andalana baiko manaraka fotsiny no ampiasainao:
"Sudo apt-get install lamp-server ^" ary woala ... Mazava ho azy fa mandeha ho azy ny fizotrany rehetra.
Marina izany. Fa raha mila zavatra voadio kokoa toy ny fametrahana nignx ianao fa tsy Apache, dia mila mampiasa fomba hafa ianao.
jiro = Linux Apache MySQL PHP, raha tianao ny nginx dia tsy jiro intsony 😛
Ny fonosana "server-jiro" dia tsy hita ao amin'ny trano fitahirizako Precise.
eo amin'ny faran'ny fonosana dia misy "^": sudo apt-get install lamp-server ^
Ny tianao hambara:
apet-mahazo hametraka tasksel
ary safidio ny safidy LAMP-SERVER ary tohizo ny fametrahana 😀
Izay ilay hitako.
Jereo, amin'izao fotoana izao dia tsy azoko atao ny manamarina izany fampahalalana izany. Na izany aza, araka ny fonosana Ubuntu, tsy ho toy izao: http://packages.ubuntu.com/search?keywords=lamp&searchon=names&suite=saucy&section=all
Tsy misy fonosana toy izany.
Tutorial tsara. Tehiriziko amin'ny tianao indrindra izany.
Faly aho fa manampy, Ivan! : =)
boka dia hoy izy:
Ny baiko tsara indrindra dia ilay nolazain'i Jacob hoe: "sudo apt-get installer lamp-server ^"
Izy io dia miasa amin'ny tsiro sy ny kinova Ubuntu rehetra.
Valiny amin'ny boka
Lahatsoratra tsara ary mameno azy io, azontsika atao ny mampiasa ny baiko mysql_secure_installation (fa tsy root) hampiharana safidy fiarovana, manan-kery ho an'ny MySQL sy mariadb.
Fiarahabana avy any Chili
Marina izany ... misaotra tamin'ny fandraisana anjara!
Ryy dia hoy izy:
Manoro hevitra ny xammp aho, mora kokoa ny fametrahana ary manana interface graphique izy hampijanonana ireo serivisy
Valio i Ryy
Ny marina dia aleoko ihany koa xampp. 🙂
Ity misy fomba fametrahana azy amin'ny Slackware http://vidagnu.blogspot.com/2013/02/instalacion-de-lamp-en-linux.html
Misaotra anao! Fandraisana anjara tsara!
Aleoko mampiasa Lampp azo entina mivantana. Sintiko avy amin'ny Apache Friends aho. Fitaovana tena tsara izy io.
Valio amin'i Ds23Ytube
Tsara! Misaotra x hevitra. Amin'ny tranga maro izay matetika no mahazo aina indrindra. Marina izany.
Ah! Tsy misy fanafintohinana, fanitsiana kely fotsiny: voasoratra tsara miaraka amin'ny "C" aorian'ny "X".
Fafao dia hoy izy:
Misaotra amin'ny lahatsoratra! imbetsaka rehefa mametraka ny mpizara ubuntu miaraka amin'ny safidin'ny jiro, dia mahazo ny antsasaky ny zavatra ianao.
Valiny tamin'i Borro
Misaotra tuto tena tsara sy manokana kokoa noho ny fametrahana ny fonosana meta, satria raha ny ahy ho an'ireo zavatra kely ataoko dia tsy mila MyQL ohatra aho.
Fanamarihana kely fotsiny ny fisie php fitsapana dia tokony ho ao anaty fampirimana html raha ampidirina tsara izy, noho izany ny baiko famoronana;
Torohevitra iray hafa dia ankoatry ny fanomezana fahazoan-dàlana mankany amin'ny folder / var / www, araky ny nolazainao, dia ny manampy azy io amin'ny vondrona misy ny mpampiasa miaraka amin'ilay baiko;
Azontsika atao ny mamorona antontan-taratasy sy rohy ao aminy mba hiasa
Misy manana hevitra momba ny fametrahana LAMP amin'ny Arch ve? Efa nanaraka ny torolàlana wiki aho ary rehefa nanomboka nanamboatra PHP Apache dia nijanona tsy niasa intsony. uu
Valiny tamin'i Wako
Azonao ampiasaina Bitnami ary mamonjy fotoana be dia be ianao.
kengy dia hoy izy:
tutorial tena tsara dia nanampy ahy betsaka misaotra !!!
Mamaly an'i kengy
Misaotra betsaka =) tutorial tsara =) arahaba cdt. Manantena aho fa hahita bebe kokoa amin'ny zavatra vita an-tsoratra nataonao! ...
Misaotra, misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anjara. Niasa be loatra tamiko izany. Mazava ny baiko ary hazavaina amin'ny filaharana mba hahatratrarana ny farany tadiaviko, ny fandaharana
Mila fanampiana aho, boky torolàlana, zavatra mamela ahy hametraka boribory feno amin'ny ubuntu sy ny baiko hitandrina izay rehetra mifandraika amin'ny mailaka. Avy sahady dia misaotra betsaka.
Fantatro fa efa antitra ity lahatsoratra ity, saingy ralehilahy, namonjy ny aiko ianao, nieritreritra aho fa tsy hianatra php mihitsy.
DavidGL dia hoy izy:
Ny fampianarana tsara indrindra hitako tamin'ity. Tamin'izy rehetra dia tsy nahomby aho. Misaotra betsaka!!! Efa manana ny solosainako vonona hivoaka aho. Hee hee
Valio amin'i DavidGL
Tompon'ny Kemecraft dia hoy izy:
Mahazo lesoka 404 aho, misy afaka manampy ahy? Misaotra anao
mandiso http://us-west-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-fanavaozana / main MySQL-mahazatra rehetra 5.5.41-0ubuntu0.14.04.1
mandiso http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security / main mysql-iraisana rehetra 5.5.41-0ubuntu0.14.04.1
Ary lesoka bebe kokoa.
Valiny amin'ny Tompon'ny Kemecraft
duby2008 dia hoy izy:
Nanazava tsara. Misaotra betsaka!.
Valiny tamin'ny duby2008
Valiny ivan flores
Tsisy fisaorana! 🙂
Toro lalana tsara dia tsara hametrahana Lamp amin'ny ubuntu sy ny derivatives ... misaotra
miasa 100% amin'ny Xubuntu 15.04 & Elementary Os
Misaotra tamin'ny fampianarana ...
Banga iray eto amin'ity faran'ny andalana ity: «sudo add-apt-repository 'deb http://mariadb.biz.net.id//repo/5.5/ubuntu main saucy main]
Tantano ny fampiharana ary makà sary ao amin'ny FirefoxOS miaraka amin'ny ZTE Open